Nnwom 46 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
“Onyankopɔn ne yɛn guankɔbea”
Onyankopɔn anwonwadwuma (8)
Onyankopɔn ma akodi gyae wɔ asaase nyinaa so (9)
Wɔde ma dwom kyerɛfo. Kora mma dwom.+ Wɔto wɔ Alamot* kwan so. 46 Onyankopɔn ne yɛn guankɔbea ne yɛn ahoɔden,+Ahohia mu boafo a ɔwɔ hɔ daa.+ 2 Ɛno nti sɛ asaase wosow,Na mmepɔw tutu kogu ɛpo ase,+ 3 Sɛ emu nsu bu fa so, na etwa ahuru,+Na mmepɔw wosow biribiri mpo a, yɛrensuro. (Sela) 4 Asubɔnten bi wɔ hɔ a ne nsuwansuwa ma Onyankopɔn kurow di ahurusi,+Ɛma Ɔsorosoroni no ntamadan kronkron kɛse no di ahurusi. 5 Onyankopɔn wɔ kurow no mu;+ wɔrentumi nsɛe no. Sɛ edu ahemanakye a, Onyankopɔn bɛba abɛboa no.+ 6 Amanaman no yɛɛ gyegyeegye, wotuu ahenni gui;Ɔmaa ne nne so, na asaase nanee.+ 7 Asafo Yehowa ka yɛn ho;+Yakob Nyankopɔn yɛ yɛn guankɔbea.* (Sela) 8 Mommra mmɛhwɛ Yehowa nnwuma,Sɛnea wayɛ anwonwadwuma pii wɔ asaase so. 9 Ɔma akodi gyae wɔ asaase nyinaa so.+ Obubu agyan mu, na otwitwa peaw mu asinasin;Ɔde gya hyew asraafo nteaseɛnam.* 10 “Munnye ntom, na munhu sɛ mene Onyankopɔn. Wɔbɛma me so wɔ amanaman mu;+Wɔbɛma me so, asaase so.”+ 11 Asafo Yehowa ka yɛn ho;+Yakob Nyankopɔn yɛ yɛn guankɔbea.+ (Sela)
^ Anaa “yɛn abantenten.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “akyɛm.”